Liverpool oo war naxdin leh heshay & kulammada uu seegayo Alexander-Arnold oo la sii ogaaday – Gool FM
(Liverpool) 10 Nof 2020. Liverpool ayaa heshay war naxdin leh kaddib markii shaaca laga qaaday nooca dhaawaca xiddigeeda da’ada yar ee Trent Alexander-Arnold iyo mudada uu garoomada ka maqnaanayo.
Macalin Jürgen Klopp ayaa la dhibtoonaya dhaawacyo badan ee soo gaaray xiddigaha kooxdiisa Liverpool, waxaana ugu muhiimsan xiddigaha dhaawaca ku maqan daafaca reer Holland ee Virgil van Dijk.
Alexander-Arnold ayaa ku dhaawacmay kulankii Manchester City, kaasoo ku dhamaaday barbardhac 1-1 ah, sida uu qoray wargeyska “Daily Express” ciyaaryahanka ayaa soo gaaray dhaawac kubka ah.
Wargayska ayaa warbixintiisa ku sheegay in Arnold uu garoomada ka maqnaan doono muddo ku dhow 4 todobaad ah, wuxuu seegi doonaa 6 kulan, Saddex horyaalka Premier League ah, iyo saddexda kulan kaga harsan Reds heerka group-yada ee tartanka UEFA Champions League.
Liverpool ayaa waayi doonta adeega Arnold kullamada kooxaha Leicester City, Brighton iyo Wolverhampton ee horyaalka Premier League ah, iyo saddexda kulan kaga harsan wareega Group-yada tartanka Champions League ee kala ah Atlanta, Ajax iyo Maitland.